कोरोना महामारीसंग लड्न प्रधानमन्त्री ओलीले पदको मोह नराखी राजीनामा दिएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्छ !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विश्व इतिहास र हाम्रो पुस्ताकै ठूलोमध्ये एक यो युद्धमा देशले सेनापतिबिनै लड्न पर्दा एउटा राष्ट्रवादी नागरिकलाई पक्कै बिझ्ने बिषय हो !
नारायण गाउँले – सच्चा राष्ट्रियता भनेको यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले पदको मोह नराखी राजीनामा दिनु र अर्को व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो ।
यो लड़ाइँ अब एउटा भाइरससँगको मात्रै होइन । विज्ञप्ति निकालेर आज यति जना सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । यो त दुई चार हप्तामा सकिएला पनि । तर यो ग्लोबल क्राइसिसले अन्तजस्तै हामीकहाँ पनि अभूतपूर्व आर्थिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ । यसका लागि एकीकृत रूपमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता हुन्छ । देश केही हप्ता ठप्प हुने लक्षण देखियो ।
दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्नेलाई के गर्ने ? बाटोमा पोलेको मकै र चटपटे बेचेर गुजारा गर्नेलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? दैनिक गिटी कुटेर छोराछोरीको मुखमा माड़ लगाउने आमालाई के गर्ने ? खलासीलाई के गर्ने ? कपाल काटेर जीविका चलाउनेलाई के गर्ने ? सानो बिजनेश चलाएर छोराछोरी पढाउनेलाई के गर्ने ? सबै राष्ट्रिय महत्त्वका योजना थला पर्ने देखियो, तिनलाई कसरी जीवन दिने ? थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्ऱ्याकमा ल्याउने ? बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्न के गर्ने ? यो सङ्कटको अन्त्यमा विश्वभर उत्पादनभन्दा माग बढ़ी हुँदा हुने मूल्यवृद्धिले निम्त्याउन सक्ने भयङ्कर व्यापारघाटा रोक्न के गर्ने ? वैदेशिक मुद्राको मुख्य आय रेमिट्यान्स नसोचेको गतिमा घट्ने निश्चित छ, त्यो ग्याप भर्न के गर्ने ? यो सङ्कट भारतमा गहिरो हुँदै गयो भने यहाँ खाद्य सामग्रीको चरम अभाव हुन सक्छ, त्यतातिर कसले कदम उठाउने ?